Before Sunrise (1995) | MM Movie Store
Vienna ကို ခုတျမောငျးနတေဲ့ ရထားတဈစငျးပျေါမှာ အသကျအရှယျအနညျးငယျကွီးရငျ့စပွုနပွေီဖွဈတဲ့ German စုံတှဲတဈတှဲ စကားမြားနကွေတယျ။ ဘယျအကွောငျးအရာကို အခွခေံပွီး စကားမြားနကွေသလဲဆိုတာကိုတော့ ကြှနျတျောမသိ။ ဒါပမေဲ့ အိမျတှငျးရေးကိစ်စတော့ ဖွဈဟနျတူတယျ။
သူတို့နှဈဦးရဲ့အငွငျးအခုနျပှဲဟာ ရထားတှဲအတှငျးက တဈခွားခရီးသညျတှကေိုပါ စိတျအနှောကျအယှကျ ဖွဈစတေယျ။ ဒါကွောငျ့မို့လညျး စာအုပျတဈအုပျကို ဖတျနတေဲ့ ပွငျသဈသူ Celine ဆိုတဲ့ မိနျးမငယျလေးဟာ ရထားတှဲရဲ့အနောကျနားက ဆိတျငွိမျတဲ့ထိုငျခုံတဈနရောကို ပွောငျးထိုငျလိုကျတယျ။
ဒီမှာတငျ မလှမျးမကမျးနားမှာ သူမလိုပဲ စာအုပျထိုငျဖတျနတေဲ့ လူငယျလေးတဈယောကျက သူမကို လှမျးမေးလိုကျတယျ။ စောစောက လငျမယား ဘာကိစ်စနဲ့ စကားတှမြေားနကွေတာလဲ ဆိုပွီး …
.အခြိနျကာလအားဖွငျ့ 18 နှဈကြျောကွာမွငျ့ သှားတဲ့အခါ
Greece ရဲ့ဟိုတယျအခနျးကဉျြးလေးတဈခုထဲမှာ လငျမယားနှဈယောကျ စကားအခွအေတငျ ငွငျးခုနျနကွေတယျ။ နှဈယောကျစလုံး မွိုသိပျထားခဲ့ရတဲ့ ခံစားခကျြတှေ၊ နားလညျခွငျးတှကေို ထုတျဖျောပွီး ရနျဖွဈနကွေတယျ။
အကယျ၍ အခွအေနတေဈခု တိမျးစောငျးသှားပါက သူတို့နှဈယောကျရဲ့အိမျထောငျရေးဟာ ပကျြစီးသှားကွတော့မယျ။ ဒါပမေဲ့ သူတို့မနေ့တောက လှနျခဲ့တဲ့ 18 နှဈကြျောက ရထားတဈစငျးပျေါမှာ လငျမယားနှဈယောကျ ရနျဖွဈတာကို အကွောငျးပွုပွီး သူတို့နှဈယောကျ စတှခေဲ့ကွတယျဆိုတာကိုပဲ။
.ကြှနျတျောတို့တှေ အမွဲပွောလရှေိ့တဲ့ ဝေါဟာရလေးတဈခုရှိတယျ။ ရစေကျတဲ့။ လူသားနှဈဦးဟာ ရစေကျရှိလို့ကံကွမ်မာက တမငျဖနျတီးပေးတာလား၊ ဒါမှမဟုတျ ထိုရစေကျဆိုတဲ့အရာကို မဖွဈ ဖွဈအောငျ ကြှနျတျောတို့လူသားတှကေပဲ ကံကွမ်မာကို လှညျ့စားခဲ့ကွတာလား။
Before Trilogy လို့ရုပျရှငျခဈြသူတှရေဲ့နှလုံးသားမှာ ရပေနျးစားတဲ့ Before Sunrise, Before Sunset နဲ့Before Midnight ဇာတျကားတှကေို ကွညျ့ပွီးတဲ့အခါမှာ ပထမဆုံး စတှေးမိတဲ့ကြှနျတေျာ့ရဲ့အတှေးက ဒါပဲ။
ဘဝရဲ့တဈနနေ့တေ့ဈခြိနျခြိနျမှာ လူသားတဈယောကျကို တှမေ့ယျ။ ပွီးတော့ ထိုလူသားကို ပွနျတှအေ့ောငျ သငျဟာ နညျးမြိုးစုံနဲ့တမငျဖနျတီးနခေဲ့မိမယျ။ ဒါတှရေဲ့မွဈဖြားခံရာက အခဈြပဲ။
သူ့နာမညျက James။ ဒါပမေဲ့ ရငျးနှီးတဲ့သူတှကေ သူ့ကို Jesse လို့ပဲချေါကွတယျတဲ့။ ဒီတော့ ကြှနျတျောတို့လညျး သူ့ကို ရငျးနှီးတယျလို့ခံစားရအောငျ Jesse လို့ပဲ ချေါကွတာပေါ့။ သူဟာ ခဈြသူကောငျမလေးဆီကို လာလညျဖို့ဆိုတဲ့ရညျရှယျခကျြနဲ့ဥရောပကို ရောကျလာတယျ။
ဒါပမေဲ့ မဟနျတဲ့အခွအေနတှေကေို ရိပျမိတဲ့သူဟာ ကနျြတဲ့ငှနေဲ့ပဲ အမရေိကားကို ပွနျဖို့ထှကျလာခဲ့တယျ။ Vienna မွို့ကနေ လယောဉျနဲ့US ကို မထှကျခှာခငျ Vienna ကို ရထားတဈစငျးစီးပွီး လိုကျလာတယျ။ ဒါပမေဲ့ ထိုရထားပျေါမှာ ပွငျသဈသူ မိနျးကလေးတဈယောကျဟာ သူနဲ့မလှမျးမကမျးနားမှာ လာထိုငျပွီး စကားစမညျပွောဖွဈတာကွောငျ့ ထိုကောငျမလေးကို သူစိတျဝငျစားသှားတယျ။
သူတို့နှဈယောကျရဲ့စကားဝိုငျးဟာ မပွီးဆုံးသေးဘူးဆိုတာ သူသိတယျ။ ဒါကွောငျ့ အရဲစှနျ့ပွီး Vienna မွို့ပျေါကို သူနဲ့အတူ တဈညလောကျ လိုကျလညျပွီး စကားတှဆေကျပွောဖို့ဖိတျချေါခဲ့တယျ။ အမှနျတော့ ဒါဟာ ရူးကွောငျကွောငျနိုငျတဲ့ လုပျရပျတဈခုလို့တဈခြိ့က ထငျကွေးပေးခငျြပေးကွလိမျ့မယျ။
ကြှနျတျောကတော့ သူလုပျသငျ့တဲ့အရာတဈခုကို လုပျခဲ့တယျလို့ပဲ မွငျတယျ။လူသားနှဈယောကျကို ဘယျအရာက ဆကျစပျပေးတယျလို့ခငျဗြားတို့ထငျကွသလဲ။ ကြှနျတျောကတော့ ထိုလူသားနှဈယောကျ ပွောဖွဈတဲ့ စကားစအကွောငျးအရာတှကေပဲ လူသားနှဈယောကျကို ဆကျစပျပေးတာလို့မွငျတယျ။
လောကမှာ ကိုယျနဲ့လူတဈယောကျ စကားပွောရငျး စကားစတှပွေတျသှားမှာ ပွောမဲ့စကားတှကေုနျခမျးသှားမှာကို မသိစိတျကရော သိစိတျကပါ စိုးထိတျနပွေီဆိုရငျ ထိုအခှငျ့အရေးကို လကျလှတျဆုံးရှုံးမခံသငျ့ဘူး။
Director Richard Linklater ဟာ လူ့ဘဝရဲ့တနျဖိုးအရှိဆုံးအခြိနျတှဟော ဘယျအခြိနျတှလေဲဆိုတာ ကောငျးကောငျးသိခဲ့တဲ့သူပဲ ဖွဈလိမျ့မယျ။ ဒါကွောငျ့ သူရေးဖှဲ့ခဲ့တဲ့ ဇာတျကောငျ Jesse ဟာ Celine ကို စကားတှေ ဆကျပွောဖို့ဖိတျချေါခဲ့တယျ။ Celine လညျး မငွငျးဆနျခဲ့ဘူး။
ဒီလိုနဲ့သူတို့နှဈယောကျဟာ ရထားပျေါက ဆငျးလာကွပွီး Vienna မွို့ပျေါကို ပထမဆုံး ခွလှေမျးတှေ စလှမျးပါတော့တယျ။သူတို့မှာ သှားရမဲ့ Destination ဆိုတာ မရှိဘူး ။ ရောကျတတျရာရာ ခွဦေးတညျ့ရငျး စကားတှေ ဆကျပွောကွတယျ။
သူတို့နှဈယောကျ ပွောခဲ့တဲ့ စကားတှဟော အကွောငျးအရာ အမြိုးစုံတယျ။ ဘဝအကွောငျးတှပေါတယျ။ ခံယူခကျြတှပေါတယျ။ အတှေးအချေါတှပေါတယျ။ နိုငျငံရေးအကွောငျးအရာတှပေါတယျ။ ဘာသာရေးတှပေါတယျ။ မကျြစိရှမှေ့ာ မွငျတှနေ့တေဲ့ မွငျကှငျးတှပေါတယျ။ အခဈြရေးတှပေါတယျ။
သူတို့စိတျကူးထဲမှာ ပျေါပေါကျလာတဲ့ အတှေးတှအေကုနျလုံးကို ပွောဖွဈကွတယျ။ Vienna မွို့လေးပျေါက အုတျလမျးလေးတှပေျေါက သူတို့နှဈယောကျရဲ့ခွသေံတှဟော ထပျထပျလာလေ သူတို့နှဈဦးပွောဖွဈတဲ့ အကွောငျးအရာတှဟော ပိုပွီး ဆကျစပျမှု ရှိလာလလေပေဲ။
ထိုညလေးဟာ တဈဖွညျးဖွညျးနဲ့ပိုနကျလာတယျ။ တဈနရောမှာ ဗဒေငျဟောဆရာမတဈယောကျကို တှခေဲ့တယျ။ တဈနရောမှာတော့ ကဗြာဆရာတဈယောကျနဲ့တှတေ့ယျ။ ထိုကဗြာဆရာဇာတျကောငျက ထူးဆနျးတယျ။ သူကလူတှဆေီကနေ ငှကေို အခမဲ့မတောငျးဘူး။
လူတှကေို စိတျထဲကရှိတဲ့ စကားလုံးတဈလုံးကို ရရှေတျခိုငျးတယျ။ ထိုစကားလုံးကို အခွခေံပွီး ထိုခဏအတှငျး သူကဗြာတဈပုဒျဖှဲ့နှဲ့ရေးသားမယျ။ ဖတျတဲ့သူတှကေ နှဈသကျမှ၊ ပွီးတော့ သူတို့ဘဝတှမှော တဈခုခုနဲ့ဆကျနှယျတယျလို့ခံစားရမှ သူ့ကိုစတေနာရှိသလောကျ ငှပေေးကမျးခဲ့ခိုငျးတာမြိုး။
သူက Jesse နဲ့Celine ကို ဖှဲ့ပေးလိုကျတဲ့ ကဗြာလေးက အရမျးလှလှနျးတယျ။
Daydream delusion, limousine eyelash / Oh baby with your pretty face /
Dropatear in my wineglass / Look at those big eyes / See what you mean to me / Sweet-cakes and milkshakes / I’madelusion angel /
I’mafantasy parade / I want you to know what I think / Don’t want you to guess anymore / You have no idea where I came from / We have no idea where we’re going /
Lodged in life / Like branches inariver/ Flowing downstream / Caught in the current / I carry you / You’ll carry me / That’s how it could be /
Don’t you know me? / Don’t you know me by now?
ထိုညတဈညမှာ လရောငျဟာ လငျးလကျနခေဲ့သလား၊ မှောငျမိုကျနခေဲ့သလားဆိုတာကိုတော့ သူတို့နှဈယောကျပဲ အသိဆုံးဖွဈခဲ့လိမျ့မယျ။ ဒီလိုနဲ့နောကျနမေ့နကျမှာ ကိုယျပိုငျခရီးတဈခုဆီကို သူတို့အသီးသီးဆကျသှားကွတော့တယျ။
လူသားတှဟော မတညျမွဲတဲ့ ကတိတှကေို ပေးတတျတဲ့နရောမှာတော့ ထူးခြှနျကွတယျ။ ဒီလိုပဲ သူတို့လညျး နောကျ ၆ လကွာရငျ ဒီမွို့လေးမှာ ပွနျတှကွေ့မယျဆိုပွီး ကတိတှပေေးခဲ့ကွတယျ။ထိုရုပျရှငျဇာတျကားထှကျခဲ့တုနျးက ပရိသတျတိုငျးဟာ သူတို့နှဈယောကျ ပွနျတှခေဲ့ကွလား၊
မတှဖွေ့ဈခဲ့ကွဘူးလားဆိုတာ ဘယျသူမှ တပျအပျမပွောနိုငျခဲ့ကွဘူး။ ကိုယျပိုငျထငျကွေးတှေ ပေးခဲ့ကွတယျ။ ထိုအဖွကေို နောကျ ၉ နှဈအကွာမှ ပရိသတျတှေ ရခဲ့ကွတယျ။
Vienna ကို ခုတ်မောင်းနေတဲ့ ရထားတစ်စင်းပေါ်မှာ အသက်အရွယ်အနည်းငယ်ကြီးရင့်စပြုနေပြီဖြစ်တဲ့ German စုံတွဲတစ်တွဲ စကားများနေကြတယ်။ ဘယ်အကြောင်းအရာကို အခြေခံပြီး စကားများနေကြသလဲဆိုတာကိုတော့ ကျွန်တော်မသိ။ ဒါပေမဲ့ အိမ်တွင်းရေးကိစ္စတော့ ဖြစ်ဟန်တူတယ်။
သူတို့နှစ်ဦးရဲ့အငြင်းအခုန်ပွဲဟာ ရထားတွဲအတွင်းက တစ်ခြားခရီးသည်တွေကိုပါ စိတ်အနှောက်အယှက် ဖြစ်စေတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လည်း စာအုပ်တစ်အုပ်ကို ဖတ်နေတဲ့ ပြင်သစ်သူ Celine ဆိုတဲ့ မိန်းမငယ်လေးဟာ ရထားတွဲရဲ့အနောက်နားက ဆိတ်ငြိမ်တဲ့ထိုင်ခုံတစ်နေရာကို ပြောင်းထိုင်လိုက်တယ်။
ဒီမှာတင် မလှမ်းမကမ်းနားမှာ သူမလိုပဲ စာအုပ်ထိုင်ဖတ်နေတဲ့ လူငယ်လေးတစ်ယောက်က သူမကို လှမ်းမေးလိုက်တယ်။ စောစောက လင်မယား ဘာကိစ္စနဲ့ စကားတွေများနေကြတာလဲ ဆိုပြီး …
.အချိန်ကာလအားဖြင့် 18 နှစ်ကျော်ကြာမြင့် သွားတဲ့အခါ
Greece ရဲ့ဟိုတယ်အခန်းကျဉ်းလေးတစ်ခုထဲမှာ လင်မယားနှစ်ယောက် စကားအခြေအတင် ငြင်းခုန်နေကြတယ်။ နှစ်ယောက်စလုံး မြိုသိပ်ထားခဲ့ရတဲ့ ခံစားချက်တွေ၊ နားလည်ခြင်းတွေကို ထုတ်ဖော်ပြီး ရန်ဖြစ်နေကြတယ်။
အကယ်၍ အခြေအနေတစ်ခု တိမ်းစောင်းသွားပါက သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အိမ်ထောင်ရေးဟာ ပျက်စီးသွားကြတော့မယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့မေ့နေတာက လွန်ခဲ့တဲ့ 18 နှစ်ကျော်က ရထားတစ်စင်းပေါ်မှာ လင်မယားနှစ်ယောက် ရန်ဖြစ်တာကို အကြောင်းပြုပြီး သူတို့နှစ်ယောက် စတွေ့ခဲ့ကြတယ်ဆိုတာကိုပဲ။
.ကျွန်တော်တို့တွေ အမြဲပြောလေ့ရှိတဲ့ ဝေါဟာရလေးတစ်ခုရှိတယ်။ ရေစက်တဲ့။ လူသားနှစ်ဦးဟာ ရေစက်ရှိလို့ကံကြမ္မာက တမင်ဖန်တီးပေးတာလား၊ ဒါမှမဟုတ် ထိုရေစက်ဆိုတဲ့အရာကို မဖြစ် ဖြစ်အောင် ကျွန်တော်တို့လူသားတွေကပဲ ကံကြမ္မာကို လှည့်စားခဲ့ကြတာလား။
Before Trilogy လို့ရုပ်ရှင်ချစ်သူတွေရဲ့နှလုံးသားမှာ ရေပန်းစားတဲ့ Before Sunrise, Before Sunset နဲ့Before Midnight ဇာတ်ကားတွေကို ကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာ ပထမဆုံး စတွေးမိတဲ့ကျွန်တော့်ရဲ့အတွေးက ဒါပဲ။
ဘဝရဲ့တစ်နေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာ လူသားတစ်ယောက်ကို တွေ့မယ်။ ပြီးတော့ ထိုလူသားကို ပြန်တွေ့အောင် သင်ဟာ နည်းမျိုးစုံနဲ့တမင်ဖန်တီးနေခဲ့မိမယ်။ ဒါတွေရဲ့မြစ်ဖျားခံရာက အချစ်ပဲ။
သူ့နာမည်က James။ ဒါပေမဲ့ ရင်းနှီးတဲ့သူတွေက သူ့ကို Jesse လို့ပဲခေါ်ကြတယ်တဲ့။ ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့လည်း သူ့ကို ရင်းနှီးတယ်လို့ခံစားရအောင် Jesse လို့ပဲ ခေါ်ကြတာပေါ့။ သူဟာ ချစ်သူကောင်မလေးဆီကို လာလည်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဥရောပကို ရောက်လာတယ်။
ဒါပေမဲ့ မဟန်တဲ့အခြေအနေတွေကို ရိပ်မိတဲ့သူဟာ ကျန်တဲ့ငွေနဲ့ပဲ အမေရိကားကို ပြန်ဖို့ထွက်လာခဲ့တယ်။ Vienna မြို့ကနေ လေယာဉ်နဲ့US ကို မထွက်ခွာခင် Vienna ကို ရထားတစ်စင်းစီးပြီး လိုက်လာတယ်။ ဒါပေမဲ့ ထိုရထားပေါ်မှာ ပြင်သစ်သူ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဟာ သူနဲ့မလှမ်းမကမ်းနားမှာ လာထိုင်ပြီး စကားစမည်ပြောဖြစ်တာကြောင့် ထိုကောင်မလေးကို သူစိတ်ဝင်စားသွားတယ်။
သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့စကားဝိုင်းဟာ မပြီးဆုံးသေးဘူးဆိုတာ သူသိတယ်။ ဒါကြောင့် အရဲစွန့်ပြီး Vienna မြို့ပေါ်ကို သူနဲ့အတူ တစ်ညလောက် လိုက်လည်ပြီး စကားတွေဆက်ပြောဖို့ဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်။ အမှန်တော့ ဒါဟာ ရူးကြောင်ကြောင်နိုင်တဲ့ လုပ်ရပ်တစ်ခုလို့တစ်ချိ့က ထင်ကြေးပေးချင်ပေးကြလိမ့်မယ်။
ကျွန်တော်ကတော့ သူလုပ်သင့်တဲ့အရာတစ်ခုကို လုပ်ခဲ့တယ်လို့ပဲ မြင်တယ်။လူသားနှစ်ယောက်ကို ဘယ်အရာက ဆက်စပ်ပေးတယ်လို့ခင်ဗျားတို့ထင်ကြသလဲ။ ကျွန်တော်ကတော့ ထိုလူသားနှစ်ယောက် ပြောဖြစ်တဲ့ စကားစအကြောင်းအရာတွေကပဲ လူသားနှစ်ယောက်ကို ဆက်စပ်ပေးတာလို့မြင်တယ်။
လောကမှာ ကိုယ်နဲ့လူတစ်ယောက် စကားပြောရင်း စကားစတွေပြတ်သွားမှာ ပြောမဲ့စကားတွေကုန်ခမ်းသွားမှာကို မသိစိတ်ကရော သိစိတ်ကပါ စိုးထိတ်နေပြီဆိုရင် ထိုအခွင့်အရေးကို လက်လွှတ်ဆုံးရှုံးမခံသင့်ဘူး။
Director Richard Linklater ဟာ လူ့ဘဝရဲ့တန်ဖိုးအရှိဆုံးအချိန်တွေဟာ ဘယ်အချိန်တွေလဲဆိုတာ ကောင်းကောင်းသိခဲ့တဲ့သူပဲ ဖြစ်လိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် သူရေးဖွဲ့ခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကောင် Jesse ဟာ Celine ကို စကားတွေ ဆက်ပြောဖို့ဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်။ Celine လည်း မငြင်းဆန်ခဲ့ဘူး။
ဒီလိုနဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ဟာ ရထားပေါ်က ဆင်းလာကြပြီး Vienna မြို့ပေါ်ကို ပထမဆုံး ခြေလှမ်းတွေ စလှမ်းပါတော့တယ်။သူတို့မှာ သွားရမဲ့ Destination ဆိုတာ မရှိဘူး ။ ရောက်တတ်ရာရာ ခြေဦးတည့်ရင်း စကားတွေ ဆက်ပြောကြတယ်။
သူတို့နှစ်ယောက် ပြောခဲ့တဲ့ စကားတွေဟာ အကြောင်းအရာ အမျိုးစုံတယ်။ ဘဝအကြောင်းတွေပါတယ်။ ခံယူချက်တွေပါတယ်။ အတွေးအခေါ်တွေပါတယ်။ နိုင်ငံရေးအကြောင်းအရာတွေပါတယ်။ ဘာသာရေးတွေပါတယ်။ မျက်စိရှေ့မှာ မြင်တွေ့နေတဲ့ မြင်ကွင်းတွေပါတယ်။ အချစ်ရေးတွေပါတယ်။
သူတို့စိတ်ကူးထဲမှာ ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ အတွေးတွေအကုန်လုံးကို ပြောဖြစ်ကြတယ်။ Vienna မြို့လေးပေါ်က အုတ်လမ်းလေးတွေပေါ်က သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ခြေသံတွေဟာ ထပ်ထပ်လာလေ သူတို့နှစ်ဦးပြောဖြစ်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေဟာ ပိုပြီး ဆက်စပ်မှု ရှိလာလေလေပဲ။
ထိုညလေးဟာ တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ပိုနက်လာတယ်။ တစ်နေရာမှာ ဗေဒင်ဟောဆရာမတစ်ယောက်ကို တွေ့ခဲ့တယ်။ တစ်နေရာမှာတော့ ကဗျာဆရာတစ်ယောက်နဲ့တွေ့တယ်။ ထိုကဗျာဆရာဇာတ်ကောင်က ထူးဆန်းတယ်။ သူကလူတွေဆီကနေ ငွေကို အခမဲ့မတောင်းဘူး။
လူတွေကို စိတ်ထဲကရှိတဲ့ စကားလုံးတစ်လုံးကို ရေရွတ်ခိုင်းတယ်။ ထိုစကားလုံးကို အခြေခံပြီး ထိုခဏအတွင်း သူကဗျာတစ်ပုဒ်ဖွဲ့နွဲ့ရေးသားမယ်။ ဖတ်တဲ့သူတွေက နှစ်သက်မှ၊ ပြီးတော့ သူတို့ဘဝတွေမှာ တစ်ခုခုနဲ့ဆက်နွယ်တယ်လို့ခံစားရမှ သူ့ကိုစေတနာရှိသလောက် ငွေပေးကမ်းခဲ့ခိုင်းတာမျိုး။
သူက Jesse နဲ့Celine ကို ဖွဲ့ပေးလိုက်တဲ့ ကဗျာလေးက အရမ်းလှလွန်းတယ်။
ထိုညတစ်ညမှာ လရောင်ဟာ လင်းလက်နေခဲ့သလား၊ မှောင်မိုက်နေခဲ့သလားဆိုတာကိုတော့ သူတို့နှစ်ယောက်ပဲ အသိဆုံးဖြစ်ခဲ့လိမ့်မယ်။ ဒီလိုနဲ့နောက်နေ့မနက်မှာ ကိုယ်ပိုင်ခရီးတစ်ခုဆီကို သူတို့အသီးသီးဆက်သွားကြတော့တယ်။
လူသားတွေဟာ မတည်မြဲတဲ့ ကတိတွေကို ပေးတတ်တဲ့နေရာမှာတော့ ထူးချွန်ကြတယ်။ ဒီလိုပဲ သူတို့လည်း နောက် ၆ လကြာရင် ဒီမြို့လေးမှာ ပြန်တွေ့ကြမယ်ဆိုပြီး ကတိတွေပေးခဲ့ကြတယ်။ထိုရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားထွက်ခဲ့တုန်းက ပရိသတ်တိုင်းဟာ သူတို့နှစ်ယောက် ပြန်တွေ့ခဲ့ကြလား၊
မတွေ့ဖြစ်ခဲ့ကြဘူးလားဆိုတာ ဘယ်သူမှ တပ်အပ်မပြောနိုင်ခဲ့ကြဘူး။ ကိုယ်ပိုင်ထင်ကြေးတွေ ပေးခဲ့ကြတယ်။ ထိုအဖြေကို နောက် ၉ နှစ်အကြာမှ ပရိသတ်တွေ ရခဲ့ကြတယ်။
The Apartment Aka L’Appartement – Link 1